﻿ ‘प्रतिष्ठानमा आउने नयाँ भीसी थप अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ’
रौनियारलाई पहिले पनि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यो समयमा प्रतिष्ठान हाँक्ने जिम्मा खनालले नै पाएका थिए । तर पछि रौनियारले अदालतको स्टेअर्डर लिएर आएपछि खनाल पछि सरेका थिए ।
अहिले फेरी प्रतिष्ठानको नेतृत्व लिएका खनालले सबैको सल्लाह र सहयोगमा प्रतिष्ठानको पुरानो छवी र अवस्थालाई सुधार गर्न खोजिरहेका छन् । उनीसँग न्युजलयका लागि हिमाल दाहालले गरेको कुराकानी :
अहिले जटिल घटनाक्रमपछि प्रतिष्ठानको कार्यवाहक भिसि बन्नुभएको छ । अहिलेको यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अवस्था जटिल छ, तर जति नै जटिलता भएपनि अफ्ठ्यारा परिस्थितीका बिच अगाडि बढ्न र सहज तरिकाबाट जान प्रयासरत् छौं । अहिले पदाधिकारी हेर्ने हो भने अस्पताल निर्देशक र म निमित्त उपकुलपतिको हैसियतमा छौं । सिमित अधिकारका बिच हामी अघि बढीरहेका छौं ।
तर पनि हामीले अस्पतालमा आइपर्ने दैनिक कामहरु, इमरजेन्सीका कामहरु, पठन पाठनका कामहरु र अन्य अनुसन्धानका कामहरुलाई रोकेका छैनौँ । र सुधारको विषयमा टिमसँग छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।
यो प्रतिष्ठान पुर्वको प्रमुख स्वास्थ्य गन्तव्यमा पर्छ । तर पनि विभिन्न किसिमको समस्याले जकडेको जस्तो देखिन्छ, खासमा अवस्था कस्तो छ ?
प्रतिष्ठानको यो समस्या आजको समस्या होइन, विगत लामो समयदेखि नै प्रतिष्ठानमा देखिरहेको समस्या हो । एकातिर बिरामीको चाप बढ्दो छ भने अर्कोतिर लामो समयदेखि यहाँ कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
बिरामीको चापअनुसार सेवा दिनका लागि हामीले अन्य भवन बनाउने कुरा थियो । चार सय बेडको एमसिएच । २–२ सय बेडको कार्डियो अर्कोलोजी सेन्टर बनाउनुपर्नेमा विभिन्न कारणले गर्दा रोकीएको अवस्था छ । जबसम्म यी भवनहरु बन्दैनन्, तबसम्म बिरामीहरुको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
यो विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग समस्याहरु राखेका छौँ । चाँडै नै निकास हुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ ।
पहिलादेखि नै यी भवनहरु बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध थियो । प्रयास पनि भएको, तर मन्त्रीको ठाडो आदेशले रोकियो भन्ने कुरा आयो । अत्यावश्यक भवन निर्माण गर्न किन रोकियो ?
यी कामहरु मन्त्रीले रोकेको हैन । वहाँले त प्रतिष्ठानमा भएका समस्याहरु समाधान गर्न पहलहरु गरिरहनु भइरहेको छ अहिलेपनि । केहि समय अगाडि वहाँ आफै आएर अनुगमन गरेर जानु भएको हो । लामो समयदेखि किन यी काम रोकिएका छन् भनेर बुझिसक्नु भएको छ । केहि समयमा सबै समस्याहरु समाधान हुन्छ भन्ने आशा छ ।
प्रतिष्ठानको अवस्था सुधार गर्नका लागि के–के योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?
दुई किसिमका योजनाहरु छन् । पहिलो त, तुरुन्त गर्नुपर्ने कामहरुको योजना एकातिर छ भने अर्कोतिर दीर्घकालिन योजनाहरु छन् । आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि बनाएको इमरजेन्सीले नै अहिले पनि सेवा दिइ राख्नु परेको छ ।
त्यो बेलाभन्दा अहिले बिरामीको लोड धेरै बढेको अवस्था छ । हुन त पछिल्लो समय इमरजेन्सीको अर्को भवन बनाउन सुरु भइसकेको छ । तर अझै पनि ल्याब, रेडियोलोजि, एक्सरे, एमआरआइ अल्ट्रासाउण्डजस्ता सधै दिनुपर्ने सेवाहरुमा पनि बिरामीको बढ्दो संख्या र मेसिनको अभाव छ । यस्ता समस्याहरुलाई सम्बन्धित निकाय, स्वास्थ्य निकाय, प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पनि पुर्याएका छौँ । केही समयमै यी सबै समस्याहरु समाधान हुनेछन् ।
अहिलेसम्म यहाँको सेवा सुविधा विस्तारको कामलाई के ले रोकेको छ ? किन सेवा विस्तार नभएको हो ?
सरकारले यो प्रतिष्ठानलाई जति बजेट दिनुपर्ने थियो त्यति बजेट हामीलाई नदिएको अवस्था छ । केहि समयदेखि हाम्रा आफ्ना कमि कमजोरीले पनि यो विस्तार हुन समस्या भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
काठमाडौको वीर अस्पताललाई जति बजेट दिइन्छ, त्योभन्दा धेरै बिरामी आउने धेरै पुर्वाधार भएको यहा बजेट आउदैन भन्ने कुराहरु आएको छ । अब यो बजेटलाई बढाउने केहि पहलहरु भएकाछन् ?
अहिले तुरुन्तै बजेट बढ्न सक्ने कुरा होइन । दीर्घकालिन योजना बनाइरहेको अवस्था छ । यी योजनाहरुका साथ हामी नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नेछौँ । यो प्रतिष्ठान पुर्वकै १४ जिल्ला मात्र नभएर भारतबाट पनि आएका बिरामीहरु आइरहेको अवस्था छ । यहाँका चिकित्सकहरुलाई बाहिर जान निषेध छ ।
तर बस्नका लागि दिनुपर्ने जति सुविधा पनि दिन सकिरहेको छैन । त्यसैले नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो प्रतिष्ठान र अन्य प्रतिष्ठान, अस्पताललाई एउटै नजरले नहेरीदिउँ । छुट्टै ढंगले हेरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध पनि गर्छु ।
भनेपछि बजेटको व्यवस्था नै बीपी प्रतिष्ठानको अवस्था सुधार गर्ने मुख्य विकल्प हो ? कति बजेट दियो भने पर्याप्त हुन्छ ?
नेपाल सरकारले यो प्रतिष्ठानलार्ई भनिदिनुपर्यो कि हामी यति बजेट दिन्छौं, बाँकी आफ्नै कमाइबाट गर्न सक्नुपर्छ भनेर ।
नेपाल सरकारले हामीलाई बार्षिक ५० देखि ५८ करोड दिइरहेको छ भने अहिलेको खर्च हेर्ने हो भने दुई अरब ४० करोडको हाराहारी हुन्छ । यो खर्चको आधा हिस्सा जति नेपाल सरकारले दिने हो भने यो प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुसार हामी चल्न सक्छौँ ।
यस्तै हाम्रो जनशक्ती र पूर्वाधारले पढाउन सक्ने जति विद्यार्थी लिनुपर्छ । कोटा बढाउनुपर्छ । यदि त्यस्तो गर्ने हो भने आर्थिक समस्याहरु नपर्न सक्छ ।
मुख्य समस्या भनेको सरकारले यहाँ थोरै बजेट दिएको छ, त्यो एउटा पाटो हो । अर्को समस्या भनेको जति बजेट दिएको छ त्यतिको पनि काम नहुँदो रहेछ । भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ नि । अनि कसरी विश्वास गर्ने र बजेट दिने ?
यी समस्याहरु त बीपी प्रतिष्ठानको मात्र नभएर देशकै समस्याहरु हुन् । विगतमा भएका घटनाक्रमहरुले पाठ सिक्ने मौका पाएका छौँ । अब आउने दिनहरुमा फेरी यस्ता घटनाहरु नदोहोरीएलान् भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
अब प्रतिष्ठानमा सुधार आउँछ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनु हुन्छ ?
प्रतिष्ठानमा सुधार ल्याउनलाई एक जनाले मात्र सकिदैन । र हामीले यो प्रतिष्ठानलाई सुधार्नका लागि सामुहिक छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा सामुहिक छलफल र निर्णय नभएको कारणले पनि यस्तो परिस्थिती आएको हो ।
मैले कार्यवाहकको जिम्मेवारी लिएको एक महिना भयो । म आएपछि यहाँका कर्मचारी, युनियन र अन्य सरोकारवालासँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरी प्रतिष्ठानमा भएका घटनाक्रम र क्षतीको विषयमा छलफल गरेको छु । वहाँहरुले पनि सुझाव दिनुभएको छ र पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नुभएको छ ।
अब प्रतिष्ठानले कहिले शक्तिशाली उपकुलपति पाउला ?
त्यसको लागि त सरकारको निर्णय पर्खनुपर्छ । अहिले दक्ष र क्षमतावान उपकुलपतिको जरुरी छ । विगतका घटनाहरुलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट हेरेको हुनाले पनि सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने विषयमा सरकार कन्भीन्स भइसकेको छ ।
तपाईको दावेदारी पनि त दह्रै छ नि ।
मैले जुनसुकै भुमिका पाए पनि मेरो ठाउँबाट प्रतिष्ठानको हितमा भुमिका खेल्नेछु र सहयोग गर्नेछु । जो भएपनि राम्रो र सक्षम नेतृत्व हुनुपर्छ । तर मेरो आग्रह के भने अब बन्ने भीसी पहिलाभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र प्रतिष्ठानका अहिलेसम्मका समस्या र बेथिती समाधान गर्न सक्छ । अधिकार कटौती गर्दा समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ रहन्छन् ।
विगतमा जुन ढंगले प्रतिष्ठान चलिरहेको थियो, केही वर्षयतादेखि बिग्रँदो अवस्था रहेको मैले भनिरहनु पर्दैन । सबैलाई के भन्छु भने, तपाईहरुले प्रतिष्ठानलाई जसरी नियालिरहनुभएको छ र सल्लाह सुझाव दिइरहनुभएको छ, आशा छ, अझ धेरै सल्लाह, सुझाव र सहयोग दिनुहुनेछ । आशा गरौं, आगामी दिनमा हामी सामुहिकताको माध्यमबाटै प्रतिष्ठानको विकास गर्न सक्नेछौं ।